Elinye iqhinga lokunyusa ubomi bebhetri liya kuba kukukhohlisa. | I-Androidsis
Zack | | Ibhetri, Izaziso, Ezinye izixhobo, Ukukopela kwe-Android, Tutorials
Enye yezinto ezixhalabisayo kubasebenzisi be-Android bubomi bebhetri. Silungisa ukhetho, sifake usetyenziso, senze iwaka lezakhono okoko nje siphumelelayo iiyure Imizuzu yobomi yeSmartphone esiyithandayo.
Kodwa ayingawo onke "amaqhinga" okanye iingcebiso zokunyusa ubomi bebhetri ziyinyani, uninzi lwazo ziinkohliso., njengale ndiza kuthetha ngayo kweli nqaku.
Kuyacetyiswa ukuba xa ucima ulwazi lwebhetri (Sula izibalo zebhetri), ubude bayo buyandiswa. Oku kuvela kwinkolelo yokuba ukuba awuyi kuhlawulisa i-Smartphone yakho eyi-100%, ulwazi lugcinwa kwifayile, intlawulo inayo yintlawulo ephezulu yebhetri.
Oku kubizwa ngokuba sisiphumo sememori.. Ukucacisa, ndikunika umzekelo: cinga ukuba ubiza i-Smartphone yakho kwaye uyikhuphe kwi-92%. Into eyenzekayo kwimemori kukuxelela ifowuni ukuba i-92% yeyona nto ibhetri iya kuhlawuliswa, bubuxoki oko kuba kusekho i-8% eseleyo ngaphandle kokutshaja. Ngokuqinisekileyo kuthiwa kwi-intanethi ukuba le nkumbulo igcinwe kwifayile kwi-Android yethu.
Kodwa unokuqiniseka, kuba Iibhetri zangoku azichaphazeleki sisiphumo sememori, ke kuyaboniswa ukuba obu bubuxoki.
Nangona kunjalo, UDianne Hackborn, injineli ye Uphando, uqinisekisile ubuxoki kwiakhawunti yakhe kaGoogle +:
Isalathi sebhetri kwibar yesaziso sibonisa umxholo wefayile yebatterystats.bin.
Le fayile igcina ukusetyenziswa kwebhetri kwezicelo ze-Android kunye neenkqubo.
Ke ukuba nakweyiphi na iforum, okanye ubona kwi-intanethi ukuba bacebisa ukuba ususe umxholo wale fayile kwaye ibhetri inyuke, ungaphendula ukuba bubuxoki :-).
Qaphela: KwiiROMs eziphekiweyo kuyacetyiswa ukuba uyicime le fayile, kodwa unganyusi ibhetri yayo, kodwa ukuze iROM ihlale ilinganiswe kakuhle nebhetri kwaye xa ubona ipesenti yebhetri ichanekile.
Umthombo: UGoogle + UDianne Hackborn
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Ibhetri » Icebo lokwandisa ubomi bebhetri liya kuba yinkohliso
I-Android geek sitsho
Iibhaktheriya? Kubonakala kum ukuba ubungachananga ... 🙂
Kuya kufuneka ubone ukuba ileta elula itshintsha njani. Enkosi ngesilumkiso :-).
UAlfredo Soro sitsho
Nangona kuyinyani ukuba iibhetri ze-lithium azinampembelelo kwimemori, zithambekele ekuphulukaneni nokusebenza kwazo ukuba zisetyenziswa ngentlawulo ephantsi kakhulu. Kungenxa yoko le nto kucetyiswa ukuba uphinde uphinde uphinde uzenzele ukuba ziwela ngaphantsi kwe-30 okanye i-20% umzekelo. Kwaye kungcono ukucima iselfowuni kunokuba uyivumele isebenze ngaphantsi kwale mida. Nangona izixhobo zangoku zikhusela ngaphezulu, ayiyonto ilungileyo ukuba ibhetri ibashiye betshaja kangangeentsuku ezininzi.
Phendula kuAlfredo Soro
kodwa oku kuya kuba kukutsala, ngee-smartphones namhlanje kuyakhawuleza ukufikelela kwi-20% kwaye nangakumbi ukuya kwi-30%, ukuba senza oku, singasebenzisa ifowuni kangangesiqingatha sosuku !!!!
ivkoto ™ sitsho
Kwaye kuphi ukubanjwa?
Phendula kwi-ivkoto ™
Njengoko kubhaliwe kwinqaku: «Kuyacetyiswa ukuba ukuba ucima ulwazi lwebhetri (Sula iBattery Stats), ubude bayo buyandiswa.»
Oko kukuthi, iqhinga kukususa umxholo wefayile ogcina ulwazi ngebhetri kwaye ihlala ixesha elide.
Yeyiphi njengoko inqaku lam lisithi ayiyonyani.
Ndikucebisa ngeJuice Defender ngokudibeneyo neSystem Tuner.
Ukuya ePietro sitsho
Ayilunganga mpela imemori kwenzeka kwibhetri ngokwenziwa kweekhemikhali zebhetri inkqubo enzima ukuyichaza
Ewe, kodwa iibhetri zanamhlanje azisenazo iikhemikhali ezifanayo njengangaphambili.
Iibhetri eziye zafumana le mpembelelo yayiyiNickel Cadmium (NiCd) ... kodwa ngoku ziyiLithium Ion (Li-ion).
xa ndathenga i-lg optimus l9 yeza nechaji yayo yesiqhelo ndayijika ndayisebenzisa ndayisebenzisa de kwashiyeka i-8 yepesenti, ndayidibanisa ukuze ndibize ubusuku obuzayo kusuku olulandelayo emva kweeyure ezili-18 ndiyibiza nangoku ibonisa ukuba ilahlekile Ndayicima ndayilayita xa ndijonga ipesenti yomthwalo, yathi yayiyiipesenti ezingama-92%, ndayisebenzisa ngala mhla de ndayishiya ngaphandle kwebhetri ndaza ndayiqhagamshela, ndayishiya kwakhona ubusuku kwakhona Ngosuku olulandelayo ndiqhubeke nengxaki efanayo ukuba kuphela ifikelela kwi-92% yomthwalo, akukho nkqubela phambili, ayilayishi i-100%, ngubani oza kundichazela indlela yokusombulula le nto nceda
UAlfonso de Frutos sitsho
Yise apho ubuyithenge khona, ndicinga ukuba kuya kufuneka ipase uphononongo ...
Phendula kuAlfonso de Frutos
Uvavanyo lweSony Ericsson Xperia Ray (kunye no-II)